डाइबिटिज लाग्नु कारण के गुलियो खानेकुरा सेवन गर्नाले मात्रै हो त ? यस्तो छ तथ्य – Everest Dainik
डाइबिटिज लाग्नु कारण के गुलियो खानेकुरा सेवन गर्नाले मात्रै हो त ? यस्तो छ तथ्य
‘चिनी रोग’ नेपाली समाजमा यसै भनिन्छ, मधुमेह अर्थात डाइविटिजलाई । नाम नै ‘चिनी रोग’ भनेपछि चिनी जोडिने नै भयो । आम धारणा के छ भने, चिनी खानेहरुलाई चिनी रोग लाग्छ । साथसाथै जसले चिनी सेवन गर्दैनन् उनीहरु मधुमेहको जोखिममा हुँदैनन् ।
सामान्य रुपमा हामीले यस्तै बुझेका छौं । तर, के यो बुझाई सही हो ?
भनिन्छ, गुलियो धेरै नखानु, नभए चिनी रोग लाग्छ ।’ चिकित्सकले पनि मधुमेह रोगीलाई चिनी एवं गुलियोको मात्रा कम गर्न सुझाउँछन् । किनभने गुलियो खानाले मधुमेहलाई थप बढाइदिन्छ । तर, यर्थाथ के पनि हो भने, गुलियो खानेकुरासँग मधुमेहको कुनै लिनुदिनु छैन । मधुमेह यस्तो समस्या हो, जसले शरीरमा अरु रोगलाई निम्तो गर्छ । मधुमेह रोगीको दृष्टिमा समस्या आउन सक्छ । मिर्गौंला र कलेजोको समस्या आउन सक्छ ।
यस्तो रोग आखिर किन र कसरी लाग्छ ? कसलाई लाग्छ ? गुलियो खानेकुरासँग मधुमेहको के सम्बन्ध छ ?
दुई प्रकारको मधुमेह हुन्छ, टाइप(१ र टाइप(२ । यी दुबै मधुमेहको भिन्नतालाई सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ । टाइप(१ मधुमेहमा इन्सुलिन उत्पादन गर्ने कोशिका तपाईको प्रतिरक्षा प्रणालीद्वारा नष्ट हुन्छ । जबकी टाइप(२ मधुमेहमा तपाईको शरीरले प्यानक्रियाजद्वारा उत्पादन हुने इन्सुलिन प्रयोग गर्न सक्दैन ।
निष्क्रिय जीवनशैलीले शरीरलाई रोगको भण्डार बनाउँछ । जीवन सक्रिय हुनुपर्छ । यसका लागि नियमित व्यायाम आवश्यक हुन्छ । एजेन्सीको सहयोगबाट